DEG-DEG+DAAWO: Puntland oo u digniin kale u dirtay saraakiisha PSF, & Barakicinta Boosaaso – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
November 27, 2021 Xuseen 4
Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari G/Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ku eedeeyay Saraakiisha Ciidammada PSF Puntland inay barakicin ku wadan shacabka kunool xaafada Ridwaan ee magaalada Boosaaso.
G/Sare Cabdulqaadir Dirir ayaa sheegay in Ciidammada PSF ay yihiin Ciidammo katirsan dowladda Puntland, ayna dad gaar ah u qaateen faham khaldan, isagoo ugu baaqay ciidammada inay ilaaliyaan dhaqankooda, aysana noqon kuwo si khaldan loo adeegsado.
Waxaa uu intaas ku daray G/Sare Dirir ” PSF 8 sano ayaan kasoo tirsanaa, waana ogahay, waxaan ciidanka leeyahay dano gaar ah iyo siyaasad yaan laydiin isticmaalin”.
Ugu dambeyn, Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari ayaa sheegay in aysan jiri doonin in ciidammo Puntland ah dagaalama, isagoo ugu baaqay shacabka gobalka Bari inay muujiyaan dowladnimo, kana horyimaadaan cidda diidan masiirkooda.
Waddanku xulashuu u dareeray, Denina xulashaa looga fadhiyaa!
Marka, qiiq isku qarinta halla joojiyo. Haddaan doorasho/xulasho loo diyaar ahayna halla badheedho. Waxa kale oo aan arkayey iyada oo ku xigeenkii madoobena loo yeertay. Haddaba, Garoowe & Kismaanyooy, federaalka la jaanqaada ama badheedhihiinna caddaysta oo isaga baxa haddaad kadhaan.
@Hilaac adeer dalka iyo dadkuba waa reer Puntland iyagaana wax laga waydiinayaa not ini firgaajaha America caydha ku qaadanayay. Dowladnimada somaliya reer Puntland ayaa soo celiyay markii ini firgaajo adeerkiis boobay hadana burburiyay, hadana cida ilaalinaysaa waa reer Puntland soongurta ini firgaajo waa hoogay waana khasaaray waxna uma soconayaan.
waryaara dhib ha isu geesanina hadii labadelay kii ugu sareey waxeey aheed kii kuxigay in loo dhiibo ninkaa cusub laga joojiyo arintu saa ayee ku qaboob lahay wax weeyn ma ah meesha haduu dagaal dhaco khasaaro
Taliye well said, waa dhab in kooxdii haraadigii ini firgaajo ay isku dayeen inay Puntland dacaayad raqiis ah ka fidiyaan balse lagu fahmay. Puntland 23 sano jir weye waana dhaqaaqday waligeedna cadowgeedu dhabarkuu ka jabaa. Ini firgaajo waa galbaday isagoo uraya oo foolxun. Puntland ciidan keedu isma dilayo mana dhacayso abadan xabadayadu cadowga Puntland ayay ku jeeda kuna dhacaysaa InshAllah.